Jubbaland oo soo gaba-gabaysay wajiga 1aad ee doorashadda Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
Jubbaland oo soo gaba-gabaysay wajiga 1aad ee doorashadda Aqalka Sare
Waxaa Kismaayo ka dhacday doorasho billow u ah mida Baarlamaanka dalka, waxaana kusoo baxay afar Musharax.
KISMAAYO, Soomaaliya - Maamulka Jubbaland ayaa soo gaba-gabeeyay doorasho saakay Kismaayo ka billaabatay, oo daah-fur u ahayd mida Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad.
Waxaa noqday Senator-kii ugu horeeyay Ilyaas Badal Gaboose, oo 55 Cod helay, waxaana xigay C/llaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, oo 71 cod, iyadoo C/risaaq Maxamed noqday musharixii 3aad ee guuleystay isagoo helay 59, halka Iftiin Baasto uu kursiga dib u hantay tartan la'aan.
Jubbaland waxay ku leedahay Aqalka Sare 8 kursi, waxaana muuqata inuu Axmed Madoobe qorsheeyay cida ku fariisanayso, maadaama madaxda maamullada la siiyay awood ay kusoo xulayaan Musharixiinta.
Inkastoo khilaaf jiro meelaha qaar sida Somaliland iyo HirShabeelle, haddana waxay codbixinta socota rajo gelinaysaa dad badan oo mudo ku jiray shaki ah inay doorashadda dhacayso iyo inkale.